Abah Mila: Abahku Pemain Bola Sepak Rupanya..
Mila zanabola ambany-PIRENENA
Izaho no Atoa Galvin, ny findramam-bola tsy miankina mampisambotra izay manome findramam-bola amin'ny zanabola ny 2
%, Dia hanatitra fampindramam-bola amin'ny olon-tsotra sy orinasa na vondron'olona izay
dia ara-bola izy. Izany dia tombontsoa ara-bola any am-baravarana dingana
amin'izao fotoana izao sy hahazo haingana fijery ny trosa any.
Maro ny famatsiam-bola ny fahafahana sy hanampy amin'ny lafiny rehetra sy ny
Mbola isaina. Fa izany fotoana ara-bola eo amin'ny tokonam-baravarana,
ary ny vanin-taona maina ho avy any amin'ny farany, ka tsy malahelo tsy manan-tsahala ity
fahafahana. Ve ianao mila fanampiana ara-bola? No ilainao-bola ho
hampitombo ny raharaham-barotra? No ilainao-bola mba hanomboka ny raharaha eo amin'ny lehibe iray
habeny? Mila-bola fa afaka manova ny fiainanao sy ny amin'izao fotoana izao
toerana ara-bola? Ve Mila haingana-bola hametraka zavatra
eo amin'ny toerana tsara? Avy eo mijery intsony, satria ny findramam-bola no nofy
varavarana dingana ankehitriny.
Ny asa fanompoana dia omena ny olona tsirairay, orinasa
sy ny raharaham-barotra ny olona. Ny habetsahan'ny trosa hita ao amin'ny isan-karazany ny $
US $ 1,000.00 ho 500,000,000.00 na ny safidy homeko avy fampindramam-bola ho an'ny
tetikasa, raharaham-barotra, hetra, faktiora, ary maro ny antony hafa, ny findramam-bola
dia mora ary * voasivana * Raha mila fanazavana fanampiny mifandray antsika mailaka
Faharoa anarana: ..................
Fifandraisana Address: .................
fidiram-bola isam-bolana: ..............
Loan vola: .................
Tanjona ho an'ny Loan: ...............
Efa nangataka ny findramam-bola eo anatrehan'i: ............
no mahay teny anglisy: .................
VALIN'IREO FANONTANIANA ARA-MISY (Matetika Fanontaniana) Manana tsotra
mamorona ho anao ny hameno mampihatra ho trosa. hameno hiala izy, ka handefa azy
ho ahy. Manarona ny fampiharana ny foto-kevitra manaraka ireto. * Ny fanomezam-pahefana *
Trosa misambotra information1.
Inona no zanabola? Ny zanabola dia miankina amin'ny tetikasa.
Ny tahan'ny dia 2% isam-bolana isan-taona ihany no liana zanabola hofany.
2. Ho zava-dehibe ny crédit? tsy
3. Aiza no ampisambory? Isika ampisambory World
4. Mandra-pahoviana no tokony hatao mba bola? Rehefa nankatò ny trosa
fampiharana, dia afaka manantena ny valiny mialoha latsaky ny 24 ora
ary ny fanohanana ara-bola ao anatin'ny 72-96 ora aorian'ny fandraisana ny vaovao ilaintsika
5. Inona no ny vola ho? Izay ho kajy ho anao sy
naniraka tany aminao amin'ny fandaharam-potoana fandoavan'ny alongwith ny trosa teny.
Manantena izahay ny mpandraharaha matanjaka fifandraisana miaraka aminao.
the community Loancompany August 29, 2016 at 3:07 PM
the community Loancompany August 29, 2016 at 3:11 PM